Onye nlekọta ụlọ ọrụ gọọmentị na-azụpụta oge
Onye nlekọta nchịkwa
Ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi
Ị na-eme na nkà dị ka telephony, n'ikuku, ozi na akwụkwọ ozi, zipu na zipu ụlọ nzukọ na nkwado nchịkọta izugbe. Ị na-arụkwa nkà ndị a n'ebe ọrụ.
Ị dị n'usoro
Ọzụzụ nchịkwa (ọrụ) na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ ise.
I nwekwara ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ọzọ mgbe gụsịrị akwụkwọ nchịkwa-ọnụọgụ abụọ.
Usoro ihe omumu oge a bu ihe di mma na usoro ihe omume ụlọ ọrụ na ọzụzụ oge nile. N'ime oge ahụ, ị ​​naghị agbaso otu ọnọdụ, ma ị na-arụ ọrụ dịka onye nlekọta nhazi (ọrụ). Ya mere, ọ bụghị nanị na ị maara ihe ngosi ahụ kama ị na-amụtakwa na omume.
Ịkwesighi ihe ọ bụla pụrụ iche tupu ị mara maka ọrụ ndị ọrụ nchịkwa (ọrụ). Ọ dị mkpa na Dutch gị dị mma. E kwuwerị, ị ga-ekwurịta okwu na Dutch.
Ọ bụrụ na ejighị n'aka na ọzụzụ ahụ bụ ihe maka gị, biko egbula ịkpọtụrụ anyị.
Kedu ka ọrụ gị na nlekọta si yie?
Dị ka onye nchịkwa nchịkwa, ị nwere ike ịtụ anya ọrụ dịgasị iche iche na ebe nhazi. Enwere ike ime nke a dịka onye na-anabata ndị ọbịa, onye nnabata, ndị na-akpọ telefhonist (s), wdg. Iji too, ị ga-anọgide na-agụsị akwụkwọ (asụsụ, mmemme kọmputa, wdg)
Kedu ihe onye ọrụ nhazi kwesịrị?
Mgbe ọzụzụ Onye nlekọta nchịkwa maka agụmakwụkwọ oge ị nwere ike ịmụtakwu ebe ọzọ. Dịka ọmụmaatụ: Ụlọ ọrụ ahụike, njem nleta, HBO5, International Trade, Hostess, ...
A na-eji nlezianya arụ ọrụ oge na-agụ akwụkwọ
Kedu ihe omume agụmakwụkwọ pụtara maka ndị ọrụ nhazi?
Onye ọrụ nchịkọta nlekọta a gụnyere 5 modul:
Na-akwado ihe aga-eme
Na nkuzi a bara uru ị ga-amụta:
mepụta, zuru ezu ma jiri akwụkwọ azụmahịa;
jigide nkwekọrịta dị mfe;
ederede uzo nke oma na mkpirisi 10 dika iwu BIN;
na-arụ ọrụ na nhazi okwu, kọmputa, telefax ...;
mee nhazi ọrụ nlekọta nzuzo n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi, dị ka: inye akwụkwọ ozi maka ụdị na ịmepụta akwụkwọ n'ụzọ doro anya;
banyere nhazi nke ụlọ ọrụ, nhazi, ozi na-abata na nke na-apụ apụ na e-mail ...;
kwupụta onwe gị na nke ọma na Dutch, French na Bekee. Ma okwu ọnụ na ide.
Okwu ọzọ (s) maka nduzi a